Fahad oo bilaabay faafinta sirta Farmaajo iyo qorshaha ka dambeeya oo la,ogaaday | SMC
Home WARARKA MAANTA Fahad oo bilaabay faafinta sirta Farmaajo iyo qorshaha ka dambeeya oo la,ogaaday
Fahad oo bilaabay faafinta sirta Farmaajo iyo qorshaha ka dambeeya oo la,ogaaday
Xildhibaan C/ Fitaax Ismaaciil Daahir oo ka mid ah xubnaha Golaha Shacabka Somaliya ayaa sheegay in Agaasimaha Sirdoonka Somaliya kulan qarsoodi ah uu la qaatay Xildhibaano ka tirsan Baarlamaanka Somaliya.
Xubnaha uu la kulmay ayaa ka mid ah Xisbiga UPD ee uu hoggaamiyo Madaxweynihii hore ee Somaliya Xasan Sheehkh Maxamuud, waxaana uu ka dalbaday xubnahaasi muddo kordhin loo sameeyo Madaxweyne Farmaajo.
Xildhibaan Cabdi Fitaax Ismaaciil Daahir ayaa qoraal uu soo dhigay Boggiisa xiriirka Bulshada wuxuu ku xaqiijiyay kulanka.
“Fahad Yasin ayaa kulan qarsoodi ah ugu yeeray xubno muhiim ah oo ka tirsan UPD. Wuxuu soo jeediyay in Xukuumadda lala wadaago lagalana shaqeeyo muddo-kordhin loo sameeyo Madaxweyne Farmajo. Ujeedada uu soo-jeedinta noocan ah ka leeyahay waa in shaki la kala dhex dhigo isbahaysiga xisbiyadda waaweyn ee mucaaradka ah. ” Ayuu ku yiri Qoraalka uu soo dhigay Boggiisa xiriirka Bulshada Xildhibaanka.
Muddooyinkii dambe waxaa soo xoogeysanaayay hadal haynta ku aadan in madaxda dowladda Federalka Somaliya ay doonayaan muddo kordhin in loo sameeyo, balse Xildhibaano badan ay ka soo horjeedaan arrintaasi.
Dowladda Somaliya ayaa waxaa u harsan hal sano oo kaliya mana jirto wado muujinaysa u diyaargarow doorasho ka dhacda dalka, taasi oo ah walaaca Bulshada ay qabaan in madaxda muddo kororsi ay sameeyaan.
Previous articleDaawo Gaadiidleyda Muqdisho oo maalintii labaad dibadbax dhigay
Next articleCabdicasiis Xasan Maxamed ( Lafta-gareen ) oo Magacaabis sameeyey